ग्लोबल आइएमई बैँकको नयाँ शाखा तनहुँको बन्दीपुरमा
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । ग्लोबल आइएमई बैंकले सोमबार प्रदेश नं. ४ को तनहूँ जिल्ला, बन्दीपुर गाँउपालिका वडा नं. २, बन्दीपुरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बन्दीपुर शाखा सञ्चालनसँगै बैँकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या १५०...
ओपोले क्वालकमद्वारा सञ्चारित डुअल-मोड ५ जी स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । वैश्विकस्तरमै एक अग्रणी स्मार्ट उपकरण ब्राण्ड, ओपोले डुअल मोड फाइभजी स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ । ओपोका चिफ ५ जी साइन्टिस्ट, हेनरी ट्याङले बार्सिलोनामा आयोजित क्वालकम ५जी समित...
नेपाल टेलिकमले सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा सहुलियतमा फोरजी सिम वितरण
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । नेपाल टेलिकमले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा सहुलियतमा फोरजी सिम वितरण, परिवर्तन र स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत...
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो ८५ औं शाखा आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन काठमाडौँको कमलादीमा संचालनमा ल्याएको छ । कात्तिक २४ गते उक्त शाखा कार्यालयमा पूजा पाठ गरी बैंकिङ्ग कारोवारको सुरुवात...
सामसङको ट्रिपल रियर क्यामरायुक्त स्टाइलिस ग्यालेक्सी ए ट्वान्टी एस नेपाली बजारमा
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । नेपालको सबैभन्दा ठूलो कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एवं स्मार्टफोन ब्राण्ड सामसङले हालै ग्यालेक्सी A20s बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । ग्यालेक्सी A20s मा नयाँ विशेषताहरु राखिएका छन् । कनेक्टिभिटिको नयाँ जमानामा आफ्नो अनुभवलाई...
फेरि अध्यक्ष हुने भवानी राणाको चाहना चिप्लियो !
काठमाडौं, २४ कात्तिक । विशेष साधारणसभा गरी विधान संशोधनसहित भावी अध्यक्षका लागि पुरानो व्यवस्था हटाउने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको चाहना चिप्लिएको छ । यसका लागि राणाले विधान संशोधन समिति गठन गरेकी थिइन्...
कटुस बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी
भोजपुर, २३ कात्तिक । भोजपुरका स्थानीयवासीले कटुसको व्यापार गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । जङ्गल तथा पाखोबारीमा फलेको रातो पात्लेको कटुस बेच्नेको हाटबजारमा बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । स्थानीयवासीले पनि यसलाई अर्गा्निक फलको रुपमा किनेर...
अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै
काठमाडौं, २३ कात्तिक । अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि शुक्रबार एक डलरको खरिददर ११३ रुपियाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपियाँ ८४ पैसा तोकेको...
एनआरएनको लगानी रहेको नेपाल पेमेन्ट सोलुसनलाई काराेवार गर्न अनुमति
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको काम गर्नका लागि नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रालिलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । नेपाल पेमेण्ट गैरआवासीय नेपालीको लगानी भएको कम्पनी हो ।...
कामना सेवाद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । कामना सेवा विकास बैँकद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कामना सेवा विकास बैंकको १३ औँ वार्षिकोत्सव यही कात्तिक २७ गते रहेको छ । आफ्नो १३ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कामना...
कतार एयरवेज र ईन्डिगोद्वारा कोडशेयर सम्झौतामा हस्ताक्षर
दोहा, २२ कात्तिक । कतार एयरवेजले भारतको सबैभन्दा ठूलो यात्रुबाहक एयरलाइन ईन्डिगोसँग कोडशेयर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पहिलो कोडशेयर फ्लाइट १८ डिसेम्बर, २०१९ देखि सञ्चालन हुने भएको छ । यस सम्झौतासँगै कतार एयरवेजले...
लक्ष्मी बैंकले आँखाकाे क्यान्सरकाे उपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । लक्ष्मी बैंक र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सरको पहिचान र उपचारकालागि सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाह तथा अस्पतालकी प्रमुख...
ट्याङ्कर दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
शिवनगरबाट भारी मात्रामा हतियार बरामद, विप्लव समूहको हुन सक्ने अनुमान
सचिन तेन्दुलकर नेपालमा, पुगे टियु मैदानमा